Ukulungiswa kwengqalasizinda eyimigwaqo – Msunduzi News
Ukulungiswa kwengqalasizinda eyimigwaqo
ONGOTI bayavumelana ekutheni zimbili izinto ezingabalwa njengezimqoka entuthukweni yomphakathi. Eyokuqala wukuthuthuka kwamalungu alowo mphakathi ngalinye. Kanti okwesibili wukuthuthukisa ingqalasizinda ehlinzekelwe ukusiza umphakathi. Njengohlelo lwentuthuko kaMasipala uMsunduzi lokhu kokubili kuseqhulwini.
IMeya kaMasipala, uMnu uThemba Njilo, ikhuluma esithangamini sabezindaba ebesingenyanga eyedlule ivumile ukuthi yize uMkhandlu unezinhlelo zawo ekuthuthukiseni ingqalasizinda, zikhona ezinye izidingo eziqhamuka ngokuphuthumayo nokumele zibhekelwe. Yenza isibonelo ngesikhalo sakamuva esiphume kuWadi 18 nayilapho umphakathi ubukhala ngemigodigodi endaweni. Khona lapho uNjilo usishayele ihlombe isenzo senkampani iProfhalt eqokwe ukuthi ilungise imigodi emigwaqeni yaleli dolobha.
UNjilo uphawule wathi: “Kuyathokozisa ukuthi lapho kuthuthukiswa khona ingqalasizinda bese khona lapho kuthuthukiswe amakhono amalungu omphakathi. Lokhu akugcini lapho kepha kwakha nemisebenzi njengoba sibona nje,” kusho uNjilo.
IMeneja yophiko iRoad and Transportation, uMnu uBheki Sosibo ulandise uMsunduzi News ukuthi uphiko lwakhe lwabelwe amarandi ayizigidi ezimbili nonyaka nobekuthiwe ngayo akulungiswe imigodi emigwaqeni kulo Masipala. Yize ethe lobu buchwabalalana abanele ezinkingeni ezibakhungethe kepha uthe bayothunga kuthungeke ngalokhu abanakho. “Inselelo ikhona njengoba ziningi izindawo ezidinga ukulungiswa nokho siyathemba ukuthi njengoba le nkampani ezokwenza lo msebenzi izokwazi ukusebenza zonke izindawo ezibalulilwe nakhona yenze umsebenzi osezingeni,” kusho uSosibo.
Uveze ukuthi imali abayidingayo yizigidi ezingama-R20 ekutheni kuqedwe zonke izimbobo ngoba kwezinye kudingeka ukuba kudatshulwe umugwaqo. “Isifiso sethu ukuthi nangesabelomali esizayo siphinde sithole imali esizokwazi ukuthi siyifake ekuchibeyeleni imigwaqo,” kulanda uSosibo.
Uqhube ngokuthi izindawo abazoqala ngazo yilezo abathole khona izikhalo eziningi nalezo abazaziyo futhi ukuthi zibucayi ngoba kukhona nezindawo eseziqhumise amasondo ezimoto eziningi. UMnu uGerrad Lawn wenkampani ezokwenza umsebenzi uveze ukuthi ubuchwepheshe obuzosetshenizswa lapha buzokwenziwa ngumshini i-Infrared.
Uqhube ngokuthi bazokwazi ukusheshisa ukuvala izimbobo ngoba eMsunduzi bakhiphe izimoto ezine ezizobhekana nezimbobo, kanti imoto ngayinye ithatha imizuzu eli-12 ukuqeda ukuphesha imbobo. Uthe imoto ngayinye idinga abasebenzi abayisi-6, kanti bazimisele ngokuqeqesha umphakathi khona uzokwazi ukwenza lo msebenzi baphinde bathole nesikhathi sokuxosha ikati eziko ngoba bazothatha abantu abakumawadi abasebenza kuwo.
“Ngoba siyazi umsebenzi awulula sikhethe ukuthi sifike nabashayeli bese amaWadi wona alethe abantu okumele sibafundise khona beyokwazi nokufuna umsebenzi ngomuso.
Uma sebenolwazi noma ngabe thina sesihambile njengoba kuzoba iminyaka emithathu balusebenzise engxenye,” kusho uMnu uLawn.
Uqhube ngokuthi kukhona abazobona ukuthi bangakwazi ukuba ngabaholi bamaqoqo abasebenza ngawo bese bayaqhubeka nabo.
Previous post: Ayewukela ngamanzi kuWadi 39
Next post: Izinhlelo zokuqinisa umsebenzi weCall Centre